fiaraha-monina | Avylavitra - Miray anaty fahasamihafàna, mizara hitondra hafanàna
Posted on décembre 21, 2008 by avylavitra
Mpanao gazety (J 1). Hono ho aho, te-hiverina kely aho andriamatoa Ben’ny tanàna, inona no tena tianao tsindriana amin’ilay hoe karazana diversion noersahinao amin’ny fanatanterahana ny asanao? Dia manohy kely an’ilay fanontaniako aho hoe ahoana marina ialy fomba itantananao ny asa atrehinao amin’izao fotoana izao, eo ny fitantananao ny commune, eo ny fiatrehana an’ity raharaha politika ady amin’ny tsy fahafahana miteny ary tsy ianao irery moa no milaza ilay izy satria efa maro dia maro ireo olona tonga tao an-damosinao hoe tsy ekena intsony ny tsy fisian’ny fahalalahana miteny. Ahoana no tena andaminanao an’izay izany manomboka izao?
A.R.: Ny asa ao amin’ny CUA anie dia mandeha sy miroso araka ny tokony ho izy. Eny fa rehefa betsaka hoatran’izao ny olana, rehefa misy hoatran’izao ny olana dia somary mi-ralentir na somary tsy dia mandeha haingakaingana kokoa ny fandehan-javatra eo amin’ny lafiny fitantanana. Satria isaky ny mandeha ianao dia vesarina olana foana dia tsy maintsy mamaha foana ny olana. Fa indrindra indrindra izany ny ezahako dia eo amin’ny resaka hoe televiziona na radio. Io moa no ho resahintsika lavalava kokoa rehefa avy eo satria io dia fototra iray iorenan’ny zo sy ny fahafahana demokratika, izany hoe ny fahafahana maneho hevitra sy miteny izay tsy tokony ho tapenam-bava, tsy tokony ho sakanana na ny vahoaka na ny mponina, na ny mpitondra na ny haino aman-jery eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
J: Ny zavatra misy ihany koa andriamatoa Ben’ny tanàna, izay zavatra mihatra aminao amin’izao fotoana izao sy mihatra amin’ireo ekipanao, ankoatry ny mahakasika ny fitantanana ny kaominina moa dia misy ihany koa ny fikitikitihana ny orinasanao manokana. Tsy dia zava-baovao loatra eto amin’ny firenena izay fa efa nitranga foana hatramin’izay. Fa ilay hoe fahasahiana, ilay hoe fitsanganana andeha hiteny, andeha hitaky ny rariny sy ny hitsiny, izay ngah no ataoko hoe tsy dia mbola fahita firy. Ary raha ny maha Ben’ny tanàna anao fotsiny aza, amin’ny taonanao sy ataoko hoe amin’ny experience politique ianao tsy manana mihitsy; nefa izany ianao hita hoe manana fahasahiana be. Manitikitika ny olona ihany koa hoe inona no hery manosika an’andriamatoa Ben’ny tanàna, misy manko ny resadresaka any am-badimbadika any hoe “iza no manohana an’andriamatoa Ben’ny tanàna, indrindra indrindra tao aorinan’ireny fandefasan’ny fahitalavitra VIVA an’ireny …’ny filoha teo aloha ireny. Dia mampanontany tena ny rehetra hoe inona ary no tena mampirisika an’Andriamatoa Ben’ny tanàna handray fanapahan-kevitra sy hanana fahasahiana tahaka izao.”
J2: Iah, tiako ho vantanina kokoa ny fanontianana napetrak’i… teo andriamatoa Ben’ny tanàna, ny resaka heno teny anivon’ny fitondram-panjakana nisy koa moa ny vaovao hafa niresadresaka an’izay, dia hoe ilay Ben’ny tanànan’Antananarivo dia manana fifandraisana manokana amin’ny Amiraly Didier Ratsiraka na amin’ireo ilay any an-dafy any ireo, ary atahorana eo amin’izay mety ho tohiny amin’ny atao hoe “déstabilisation” na ny “instabilité politique”. Ahoana marina ny mikasika an’izay satria ianareo tao anatin’ny fahitalavitra dia nandefa tamin’ny fotoana lavalava an’ilay Amiraly Didier Ratsiraka, ny minisitry ny filazam-baovao moa dia nilaza mihitsy fa tsy nanara-dalana ianareo ary nisy zavatra niodinkodina be tao ambadika tao.
A.R.: Mikasika an’ilay hoe inona no nanosika, raha tokony teo aoriandriana teo dia ny manosika moa dia ny fitiavana. Ny fitiavana an’ity tanànantsika ity. Ny fitiavana te-hanao zavatra, ny fitiavana te-hampa-maoderina sy hampandroso ny tananan’Antananarivo. Mikasika ny hoe fifandraisana amin’ny amiraly Didier Ratsiraka. Io dia tiako… zavatra hoatran’ny mahatsikaiky ihany satria voalohany indrindra aloha dia tsara ho fantatrisika mianankavy hoe avy aiza ny feo manely an’izany,iza no niteny an’izany,gazetin’iza no niteny an’izany, ary olona iza no mampiteny an’izany zavatra izany. Io no ilaina indrindra ny fahafahana mamaly sy fahafahana miteny. Ny zavatra tiako ho lazaina dia izao: io dia efa niatomboka tany amin’ny fampielezan-kevitra. Nolazaina fa nanana fifandraisana tamin’andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ny tenako. Ankehitriny indray dia mbola averina indray hoe manana fifandraisana amin’ny Amiraly. Eto aho dia miteny ho ren-tany ren-danitra fa mbola tsy nahita mihitsy na mivantana ny Amiraly Didier Ratsiraka, na nifampiresaka taminy mivantana, na nifampiresaka amin’olona akaiky aminy,dia tsisy mihitsy izany. Ireo izany no voalohany ireo. Ataoko fa midika zavatra be dia be angamba izay teny nataoko izay. Ary isika dia aza gaga, aza gaga indray isika raha ohatra ka rahampitso indray, rafakampitso dia hisy indray hiteny, io moa ihomehezana fotsiny ilay izy hoe mety hisy hilaza indray hoe manana fifandraisana amin’i BenLaden indray ny Ben’ny tanànan’Antananarivo. Asa, tsy fantatro satria betsaka loatra ilay tsaho. Izay no teneniko hoe tsara ho fantatsika hoe avy aiza ny teny, iza no niteny, gazetin’iza no niteny. Izay angamba no zavatra mamalona izany zavatra betsabetsaka izany.
A.R.: Mikasika ny fisamborana dia ny ho lazaiko dia ity: io zavatra io aloha dia tsy ny tenako angamba no tsy kasaina hoe ho voasambotra voalohany, na tenako ihany koa, no ho voasambotra farany amin’ity fitondram-panjakana misy eto amin’ny tany sy fanjakana ity. Ny zavatra tiako ho lazaina dia ity: ny mpanaradia ahy aloha, tany am-piandohana dia efa nanahy mafy. Betsaka ireo olona tena tia hoe “I Andry, ianao anie ka ho ataon’ny mpitondra fanjakana hoatran’izao e! ianao anie ka ataony hoatran’izao.” Ka tao anatin’izany ny resaka hoe fisamborana. Ary amin’izao isika miteny izao dia eto aho milaza, afaka manambara fa tena mba manana “raison” ihany koa any anatin’ny zavatra rehetra rehetra any fa hatrany amin’ny masoivoho aza dia misy ni-confirmer an’io hoe misy io zavatra io. Niniana natao, fa nihemotra.
J2: Ahoana andriamatoa Ben’ny tanàna no ahafahanao manazava ny hoe nitabataba tokoa moa ny feo teny an-dalambe teny ny zoma, niakatrakatra mihitsy ny hafanana. Ahoana no ahafahanao manazava hoe nandeha an-gazety fa hosamborina ianao. Nandrasana ny zoma, tsy nisy n’inon’inona nitranga. Avy eo ny tety anivon’ny ministera niteny hoe tsy misy an’izany fa resaka mandeha fotsiny izany. Iza no tena manao sinema ato anatin’ity tantara ity andriamatoa Ben’ny tanàna?
A.R.: Ny tena manao sinema angamba dia ireo efa tena zatra manao film, iza moa ny tena mpanao film eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Ny zavatra tiako ho lazaina dia ity, ary tena mampalahelo ary zavatra tsara ho tsampantsika mponina sy vahoaka eto amin’ny tanànan’Antananarivo: tao anatin’ny fotoana, fe-potoana, fotoana vitsivitsy teto amin’ny tantaran’i Madagasikara. Izay ngamba vao nisy ny Praiminisitra nogadraina.Tantely Andrianarivo no tiako holaizaina. Tao anatin’izany koa ny fanagadrana olona maro, manamboninahitra maro isan-karazany. Ary efa betsaka, betsaka dia betsaka ny gadra politika eto amin’ny tany sy ny fanjakana amin’izao isika miteny izao. Ary ny farany teo dia nisy koa ny Ben’ny tanàna efa nogadraina ary nivoaka, afaka madiodio. Izany hoe tsy meloka. Izany anie no tantara misy eto amin’ity tany sy fanjakana ity e! Samborina ilay olona dia gadraina dia izao lazaina hoe tsisy n’inon’inona nataony, tsy meloka ilay olona. Zavatra tantara miverina izany no mitady haverina indray eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Ny tiako ho lazaina dia ity: Madagasikara dia ohatran’ny vatan’olombelona. Raha voakitika ny rantsany, dia marary. Fa kosa, Antananarivo dia fon’i Madagasikara. Ary raha ny fon’i Madagasikara no voatohitohina na marary dia misy fiantraikany amin’ny vatana iray manontolo.
A.R. Io indrindra no mampametra-panontaniana hoe :Fa dia ahoana loatra re , hatraiza loatra re ilay fankahalàna? Ilay tsy fitiavana lalim-paka ny Ben’ny tanana izay misy fiantraikany any amin’ny zavatra rehetra rehetra miseho eto amin’ny tany sy ny fanjakana? Satria raha ohatra ka nakambana ny kaominin’Ivato , dia ny zavatra tiana ho lazaina izany dia ny hoe, ary voalaza fa hoe any amin’ny kaominina Ivato no hatao ny sommet an’ny Union Africaine. Mazava tsara mihitsy angamba izay zavatra izay. Nefa isika, dia lazaiko soa aman-tsara fa, raha mahamarika ianareo, eran-tany, na ny governemanta aza dia nanambara fa ny sommet, ataoko amin’ny teny frantsay ilay izy “que le sommet africain aurai lieu dans la capitale de Madagascar…”. Ary eran-tany izao dia malaza fa ny sommet-n’ny Union Africaine dia hatao eto Antananarivo. Asa! Hovàna Ivato indray ve ny Capitale de Madagascar? Satria ho’aho io zavatra io anie tsy vao izao koa no niseho e. Fa vao lany ho Ben’ny tanana volana vitsy fotsiny aho dia…nisy nihazakazaka nankany Tamatave hoe “ity no capital économique, hovàna tanteraka ity capital ity. Izao indray izany dia ao anatin’ny fotoana vitsy ihany koa dia niova indray izany hoe hatambatra ny Ivato aéroport an! Any indray izany no handraisana tanteraka ny Union Africaine. Nefa ny eran-tany dia tiko mahafantatra sy mahatsapa ary mahafantatra an’izany hoe Antananarivo izany no Capital de Madagascar, ary io na misy zavatra aza any France, ao Paris , dia hoe sommet atao ao Paris, fa tsy hoe any Roissy na aiza akory. Tsy tanàna izany no hisian’ilay hetsika fa eto amin’ny renivohitr’Ii Madagasikara, ka ohatry ny mampalahelo ihany ilay fihetsika ankehitriny. Amin’ny fomba ahoana moa no tsy hitenenanao an’izany toe-draharaha misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana izany?
J3: Andriamatoa Ben’ny tanàna, misy fanontaniana ity, hivantambatana kely ihany aho hametraka azy an, tsy haiko raha tadidinao fa nisy fotoana nipetraka hoe mpanohitra ianao, tany amin’ny voalohandohany..voatery mihitsy ianao nanazava taty aoriana kely hoe “an, an, an tsy miaraka amin’ny fitondrana aho, tsy miaraka amin’ny mpanohitra, niverimberina matetitetika izay fanazavàna nentinao izay. Fa rehefa jerena indray ilay zava-misy Andriamatoa Ben’ny tanàna dia tsy tahaka ny vao mainka ve miantso ny fanjakana hamely kanonta eo ambony lohanao ilay hoe nanova staff ianao an, dia Andriamatoa Ny Hasina Andriamanjato, Ramatoa Elia Ravelomanantsoa…Izao indray ianao niaraka nijery tamin’ny mpanao pôlitika ilay hoe “Kianjan’ny demokrasia” sy miady ho an’ny fahalalahana an, dia nifarana moa tamin’ny hoe fanohanan’ity FCD ity.
Filed under: fiaraha-monina, polotika | Tagged: Andry RAJOELINA, Demokrasia, Fahalalahana, interview Andry RAJOELINA, VIVA |	Leave a comment »